Ganacsiga iyo Tafaariiqda | Bogga 119 ee 125 Martech Zone
Tirakoobka Dukaamaysiga Fasaxa ee 2011
Isniin, November 28, 2011 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxaan ku dhajinay macluumaad muuqaal ah Jimcihii Madoobaa, midna Cyber ​​Isniinta… halkan waxaa ku imanaya xog-ururin la socota qaar ka mid ah stats-kii hore ee xilligii ciidaha lagu guuleystay. Dabcan, meesha aad lacag ka hesho waxaad ka helaysaa niman khiyaano badan-iyo dambiyada internetka oo aan ka duwaneyn xilligan ciidaha. Iibinta tafaariiqda fasaxa ee sannadkan many iyo inbadan oo ka mid ah iibsiyadaas oo ku imanaya habka aaladda mobilada ama kaniiniga, Zonealarm ayaa soo daabacday xogtan oo ay ku qoran tahay 8 talooyin si loo ilaaliyo macaamiisha internetka.
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Toddobaadkii hore waxaan la hadlay Rob Eroh, oo maamusha kooxaha wax soo saarka iyo injineernimada ee Milo. Milo waa mashiin raadinta wax iibsiga maxalliga ah oo si toos ah ugu dhafan dukaanka tafaariiqda ee iibka (POS) ama Qorshaynta Kheyraadka Ganacsiga (ERP). Tani waxay u oggolaaneysaa Milo inuu noqdo mashiinka raadinta ugu saxsan marka ay timaaddo aqoonsiga waxyaabaha ku jira alaabada gobolkaaga. Hadafka Milo waa inuu lahaado shey kasta oo yaala shelf kasta oo sheeko kasta oo ku saabsan webka…
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Waxaan ka dambeyney qaabeynta qaabkeena mobilada iyo iPad-ka ee mowduuca cusub ee Martech… waa shaqeysaa, in kastoo! Hal shay oo aad ogaan doonto ayaa ah, iyadoo lagu saleynayo kala-saarista boostada, waxaan ku haynaa xayeysiisyo kala duwan bogga. Waxaan tan ku samaynay annagoo habaynay aaladdayada isweydaarsiga ee firfircoon iyo u adeegsiga iSocket meelaynta is-adeegga ee xayeysiinta. Waxaa jira habab badan oo badan oo lagu bartilmaameedsado dhagaystayaashaada marka loo eego aaladda ay adeegsanayaan, in kastoo,
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii Haddii aadan fursad u helin wali inaad la shaqeyso WooThemes, xubin ka mid noqoshada xiisaha leh ee mawduucyada WordPress, waa inaad. Waxay qabtaan shaqo yaab leh. Waxaan haysanay xirmo horumariyaha iyaga in muddo ah ka hor inta aanan bilaabin dhismaha mowduucyo caadiya oo laga soo bilaabo dhulka. WooThemes waxay soo saartay si aad u nadiif ah, dhammaystiran oo fudud oo loo adeegsado is-dhexgalka ecommerce ee WordPress, oo loo yaqaan WooCommerce: Waxay u egtahay in dadkii waaweynaa ee WooThemes ay bixinayaan
V Hore 1 ... 118 119 120 ... 125 Next →
Shirka Weyn ee BigCommerce